အို……..ကဗျာ (၀) | PoemsCorner
ကဗျာဆရာက ကဗျာပဲဖွဲ.ချင်ပါသည်။ ဝေဖန်သူတွေကဝေဖန်မည်။သူ.ဘာသာလှနေသော အကြောင်းတရားဖြစ်သည်။ မဝေဖန်နဲ.ပြော၍မရပါ။
သို.သော် မျက်စိမှိတ်ပြီးပေတံတိုတိုလေးနှင့် မပြောစေချင်၍ ပြောမိသည်။ ဒဿနိကပညာရှင်များ ရှင်း၍မရသော အစကိုဆွဲထုတ်မိသလိုဖြစ်သွားသည်။ အနုပညာဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်ဖွဲ.ကြ၊ဆွဲကြလဲ။ ကာလကြာမြင့်စွာကရှင်းမရခဲ့သောပြဿနာ။
ရှင်းဖို.ရန်လည်းမရည်ရွယ်ပါ၊ပြောရန်အထိတတ်ကျွမ်းသူလည်းမဟုတ်ပါ။ သို.သော် ဖတ်ထားသည်များမှ ကိုယ်သဘောတူရာများကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းပါ။
ကိစ္စတစ်ခုကိုရှင်းရာတွင် နောက်သို.ဆက်၍ရှင်းသွားရန်ထက်ရှေ.က တရားကိုယ်များကို နားမလည် တော့ ဟိုးရှေ.အထိပြန်လှန်နေရသည်။တစ်ပြီးရင် နှစ်ကိုပြောရမည့်အစား သုညပါပြန်ပြောရသည်။ ပညာရှင်များရီမောကြပါလေ။ လေ့လာလိုသူများအတွက်ပါ။
အနုပညာတန်ဖိုးကစရပါမည်။ အနုပညာသည် အသုံးချတန်ဖိုးမရှိပါ။ ငတ်နေသူကိုသစ်သီးတစ်လုံးပေးက အာဟာရဖြစ်ပါမည်။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေးကဘာမှလုပ်မရပါ။
သို.သော် အနုပညာသည် သူ.တန်ဖိုးနှင့်သူ၊ သူ.နှုန်းစံနှင့်သူ။ အရှေ.တိုင်းကျမ်းများအလိုဆိုလျှင်လောကလွန်သဘော။ အကျိုးများ မလျောက်နိုင်သော်လည်း လမ်းကတော့ရှိနေပါမည်။နားတော့ခါးပါလိမ့်မည်။ အမှန်တရားဖြစ်ပါသည်။
တန်ဖိုးမရှိပဲနှင့် အနုပညာသည် ပန်းပန်နေမည်မဟုတ်ပါ။ဝေဆာဖွံ.ဖြိုးလာမည်မဟုတ်ပါ။ တန်ဖိုးထားသူများရှိနေ၍သာ အနုပညာများ ဤမြေတလွှား ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တန်ဖိုးထားသူသည် စားသုံးသူဖြစ်သည်။ အနုပညာလက်ရာများကို ခံစားသည်။ ကြိုက်လျှင်ကောင်းသည်ပြောမည်။ မကြိုက်လျှင်မကောင်းပြောမည်။ပြောခွင့်ရှိသည်။
တန်ဖိုးဖြတ်သူ ကတော့ သူ.အတွက်မဟုတ်။ သူများတွေခံစားတတ်အောင် ရှင်းပြတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်၍တွေးဆတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ.အလုပ်သည် ကောင်းသည်မကောင်းဘူး လွယ်လွယ်ပြော၍မရတော့။
သူကိုင်စွဲသောပေတံရှိရမည်။ ဟိုတုန်းကစာတွေနှင့် မတူလို.မကောင်းဘူးဟေ့လို.လုပ်လို.မရ။ ဟိုတုန်းကစာတွေကောင်း သည်ဆိုလျှင်လည်း ဘာကြောင့်ကောင်းသည်။ ဘာကြောင့်ညံ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရမည်။
သည်မှာ ပေတံ ပြဿနာဝင်လာသည်။
သရက်သီးတစ်လုံး ကောင်းလျှင်ဘာကြောင့်ကောင်းသည်ကို အခြား သရက်သီးများနှင့် ယှဉ်ပြောမှရမည်။ ငှက်ပျောသီးနှင့် မတူလို.မကောင်းဆိုလျှင်မသင့်တော်။
ထိုကိစ္စများနှင့်ပင် အစ်ဇမ်တွေ ခွဲရသည်။ မော်ဒန်နစ်ဇမ်၊ဘာအစ်ဇမ်၊ညာအစ်ဇမ်။ အသေအချာပြောပါမည်။ ဝေဖန်ရေးဆရာများထွင်ထားသော စကားလုံးများဖြစ်ပါသည်။ ကဗျာဆရာ(အနုပညာရှင်)ကမူ ထိုသို.ကန်.သတ်မထားပါ။
ပီကာဆိုသည် ကျူဗစ်ဇမ်ဆွဲလိုက်မဟဲ့လို. မရည်ရွယ်ပါ။ စေဇန်းသည် အင်ပရက်ရှင်နစ်ဇမ်လိုက်မယ်ကွာ လို.မပြောပါ။
အနုပညာရှင်ကို ဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါပြောမရပါ။ သူတို.ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေး၍ရော၊ချုပ်နှောင်၍ရောမရပါ။
ကဗျာဆရာသည် ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကိုယ့်ဘာသာ တည်ဆောက်ကြသူများဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆက်ရှင်းရမည် တို.ကို ဓားထစ်ထားပါရစေ။ ဖေါ်အဲဗားနှင့် ဖေ့စ်ဘုတ်မှ မှတ်ချက်များဖြစ်ပါသည်။
Pyei Phyo ဗမာမှာလည်း ရှိဖူးသည်။ မကြာသေးသော ကာလများဆီက ကဗျာရွတ်ကြသည်။ အိမ်ရှင် အရက်ဖိုးကုန်သည်။ ပါတ်ဝန်းကျင်နားညည်းသည်။ ကဗျာဆရာကတော့ ရွတ်ချင်လို့ ရွတ်သည်။ နားထောင်သူမရှိသောအခါ ရွတ်ခြင်း အဆုံးသတ်သွားသည်။ ကဗျာဆိုတာ ဖတ်ဖို့ဖွဲ့တာပါ။ ဖတ်သူမရှိလျှင် ကဗျာ မရှိပါ။ ဖွဲ့သူရှိလို့ ရှိသော ကဗျာ ဖတ်သူမရှိသောအခါ ပျောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကဗျာသည် ဖတ်ဖို့ဖြစ်သည်။ မိုနာလီဆာကို နှုတ်ခမ်းမွေးတပ်တော့ နှုတ်ခမ်းမွေး မိုနာလီဆာ သာ ဖြစ်သည်။ ဒါကို ဝါဒ (ဝါ) အစ်ဇင် လို့ နံမည်တပ်တော့ ဝါဒ ကျန်ရစ်သည်။ ဖျက်ဆီးမှုကို အနုပညာဟုနံမည်တပ်လျှင် ပြောင်းလဲမှုကို မနုတနုပညာဟု နံမည်တပ်သင့်သည်။
Thet Ka Moenyo
ကဗျာမှာ အနည်းဆုံးဖတ်သူတစ်၇ှိပါတယ်၊ကဗျာဆရာပါ၊ကဗျာဆရာကကဗျာပျောက်တာကို အမှုမထားပါဘူး.
ဇော်ဇော်အောင်က ပို.စ်မော်ဒန်နဲ. ပတ်သက်ရင်စာများစွာ(သုတေသနလုပ်ပီး) ရေးဘူးပါတယ်၊ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသ…ူဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဆရာ
၁ နံပါတ် တီဗီတစ်လုံးကို မလုပ်တတ်လို့ ဝယ်သွင်းသလိုမျိုး ကဗျာ့ ဝါဒတွေ ဝယ်သွင်းလာတာမျိုး ဖြစ်သင့်ပါသလား..။ (၂) နံပါတ် ဂျပန်ကားဟောင်းကို မော်ဒယ်သစ်ဆိုပြီး ညာရောင်းသလို၊ သူများဆီက စမ်းသပ်ဆဲဆေးတွေကို လူနာတွေအတွက် ပွဲတွေ့ဆေးကြီးဆိုပြီး လူတိုင်းကို…ပေးသလို၊ ကာလ၊ဒေသ၊ပယောဂ ညီညီညွတ်ညွတ် စုစည်းမှု တွေကို ဒါတွေဒီလိုရှိတယ် ဆိုချပြတိုင်း အနုပညာဘောင်ခတ်လိုက်တိုင်း.. အနုပညာလို့ လက်ခံဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ (၃) တန်ဖိုးဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ရေးသူ က ကိုယ့်ကဗျာကိုယ်ပြန်ဖတ်တာ ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်မှန်ကြည့်သလိုပါပဲ။ မဆန်းပါဘူး..။ သို့သော် တစ်သိန်းဖတ်ပြီး တစ်ယောက်မှ မလေးစားတဲ့ကဗျာနဲ့.. တစ်ယောက် (ကိုယ်မဟုတ်သော) ဖတ်ပြီး heart ထိသွားတာနဲ့ တန်ဖိုးမတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်မဟုတ်သော ပရိသတ်တစ်ယောက်လိုပါတယ်။ အနုပညာဆိုတာ ပရိသတ်မရှိရင် စမ်းသပ်ချက် အဆင့်မှာပဲရှိပါတယ်။ သိပ္ပံသာသာပါပဲ။ (၄) ကဗျာဆရာဟာ ကဗျာပျောက်တာကို အမှုထားကိုထားရပါမယ်။ သူ့ကဗျာကို သူမှ တန်ဖိုးမထားရင် သူများတန်ဖိုးထားဖို့ မျှော်လင့်စရာ မရှိပါဘူး။ ထပ်ပြောချင်တာကတော့ အနုပညာဆိုတာ ပရိသတ်လိုကိုလိုပါတယ်။ ပရိသတ်မရှိတဲ့ အနုပညာဟာ သေနေတဲ့ အနုပညာ (ဝါ) ဘာတန်ဖိုးမှ မရှိတဲ့ အနုပညာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ခံသူမရှိတဲ့ အနုပညာလို့ လွယ်လွယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ (၅) အနုပညာကို သိပ္ပံပညာလို အကန့်ခွဲ ဘောင်ချပြ လို့ ခေတ်မီချင်မီသွားပါလိမ့်မယ်..။ အနုပညာသမား ဖြစ်မသွားပါဘူး။ အနုပညာသမားစစ်စစ်က တော့ လုပ်ချင်လို့လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ အကြောင်းတွေ သိပ်မပြပါနဲ့ဆရာရယ်… အကြောင်းပြတာ သိပ္ပံပညာအလုပ်ပါ.. အနုပညာအလုပ်တွေမှာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်တို့.. ညာကြောင့်တို့ ဆိုရင် တန်ဖိုးကျသွားပါတယ်ဆရာရယ်…
၀ါဒတွေ မတင်သွင်းပါဘူး၊ဟိုမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူမှုရေးရိုက်ချက်တွေက အခုမှဒီမှာ ဖြစ်လာလို.တူသွားတာကိုပြောတာပါ။အနုပညာဟာ ဒီလောက်ဒီလောက်လို.တန်ဖိုးဖြတ်စရာမလိုတဲ့အတွက်(အသုံးချတန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွက်) တန်ဖိုးတွက်ခြင်းကိုထည့်မစဉ်းစားပါ။ ဆရာနဲ.ကျွန်တော်ဟာ ကြောင်းတူသံကွဲတွေပြောနေကြသာဖြစ်ပါတယ်၊အဓိကက မျိုးတူစုခွဲပုံမတူတာပါ။ရှုထောင့်မတူတာပါ။ကဗျာဆရာကကဗျာကိုဖွားမြင်ပီးရင်ကျေနပ်ပါတယ်။ဖတ်တာမဖတ်တာက သူ.လက်ထဲမှာမရှိပါ။ မဖတ်လဲသု.ရင်ထဲကအောင်းနေတာကိုဖောက်ခွဲပီးပါပီကျေနပ်ပီးပါပီ။ကိုမဟုတ်သောပရိသတ်ဟာသူနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကဗျာမှာကျေနပ်သူများကိုသာဆိုလိုပါတယ်။ကဗျာကို ဆရာဖြစ်အောင်လုပ်နေသူများကိုမပြောပါ။
လေးလုံးစပ်မှာ ပိုတွေ.ဘူးပါသည်။ ကိုပြောချင်တာကတမျိုး၊ကာရန်ကဆွဲခေါ်တာတမျိုးနှင့် ဒုက္ခကြီးပါသည်။ကာရန်ကိုမေ့လိုက်မှ အဆင်ပြေသွားသည်။ ပြောလိုရင်းက ကဗျာမှာ အသိမလိုပါ။ ပညာမလိုပါ။
အရပ်စကားပဲသုံးသုံး၊ပါဠိပဲသုံးသုံး (မောင်ချောနွယ်ပြောသလို) ရင်ဘတ်ချင်းပလပ်ထိုးမိဖို.က အရေးကြီးပါသည်။
ဗဟုသုတအနေနဲ့ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ …. ကဗျာ ဆိုတာ ဘာလဲ လို့ကျွန်တော်လည်းသေချာမပြောတက်ပါဘူး ။ ဝေဖန်ရေးသမားမဟုတ်သလို ကဗျာ ဆရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ မျက်စိစုံမှိတ်လည်းငြင်းခြင်းမဟုတ်ပါ ။ ဒါပေမဲ့ အပေါ်ကစာသားကိုတော့သိပ် သဘောမကျဘူးဗျာ ။ ကဗျာမှာအသိမလိုပါ ပညာမလိုပါ ဆိုတာကိုပေါ့ ။ ကျတော် သိဖူးတာကတော့ ကဗျာဆိုသည် စာရေးဆရာပညာရှိတို့၏ပစ္စည်းဥစ္စာ ။ ကဗျာလင်္ကာဆိုသည် လူများ နေ့စဉ်ပြောဆိုသုံးစွဲနေသော သာမာန်စကားများကို တေးဂီတပမာ ပြေပြစ်ချောမောစွာနှင့် ချိုသာငြိမ့်ငြောင်းအောင် ရေးဖွဲ့သီကုံးထားသော စာဖြစ်ပါသည်။ လို့ ကျွန်တော် မှတ်သားဖူးပါတယ် ။ ဥပမာတစ်ခုပေါ့ဗျာ
အားလုံးေ=ာက်ရူးပဲ .. လို့ ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ ။ ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးစွာ ရေးလိုက်တဲ့စာကို ဖတ်တဲ့လူကလည်း ဖတ်ပီး ဒေါသဖြစ်သွားမှာပါပဲ ။ ဒါကို ကဗျာလို့ ခေါ်ပါသလား ။
In: စကားပြေ Posted By: မော်နီ Date: Mar 31, 2011
Leave comment No comment & 187 views